50 xildhibaan oo dib loogu soo celiyey odayaasha dhaqanka
Gudiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka ayaa dib ugu celiyey odayaasha iyo salaadiinta soo xulayo xildhibaanada kadib marki ay ku dhaceen in ay ka gudbaan shuruudihi la rabay.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustine Mahiga ayaa sheegay in ay ka warqabaan xildhibaanada dib loo celiyey balse ay ku kalsoonyihiin in sida ugu dhaqsaha badan loogu soo badali doono dad ku haboon.
Dadka la celiyey waxa u badnaa sida la sheegayo qaar aanan heysan shahaaadada dugsiga sare oo heerkooda aqoonta uu hooseeyo, iyo qaar aad u yar oo lagu helay in ay danbiyo horay uga soo galeen Soomaaliya iyo kuwo da,doodu ay horay u badatay kana sareyso 75 sano.
Inkastoo uu Mahiga leeyahay mudo kooban ayaa lagu heli doonaa badalka dadka laga diiday xildhibaanimada, hadana waxaa ka jiro odayaasha dhankooda iyo qaabka ay beelaha uga soo dhax xulanayaan muran weyn.
Beelaha Soomaalida ayaa wali qaarkood ku heeshinin xildhibaanada iyo cidi ay ka dhigi lahaayeen, waxaana ka mid ah beesha Mudulood oo aanan wali ku heshiisnin, sidoo kale Beesha Habar Gidir ayaa iyaduna la leeyahay wali waxbaa ka dhiman.
Caqabada kale ayaa iyaduna ah, mudanayaasha lasoo celiyey qaarkood waxaa uga baxday helista jagada lacago fara badan taasoo keeni karta dhibaato, sidaasi si la mid ah waxaa jira dad ay si gaar ah u wataan odayaasha soo xulaya ee kaaba qabiilada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa aad u yar waqtiga loo heysto in lagu soo xulo xildhibaanada, iyadoo mudo 6 maalin ah ay ka harsantahay xiligi loo qoondeeyey in la doorto madaxweynaha.